မီးငယ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: April 2010
ဒီနေ့ မီးငယ်ဘ၀မှာ တခါမှကြုံရလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ကိစ္စတခု ကြုံခဲ့ရတယ် ... လူတွေလည်း ခက်ပါတယ်လေ .. ရုပ်တခု စိတ်ကိုးဆယ်တဲ့ ... မှန်လိုက်တဲ့စကား ... မှန်လွန်းတော့ မခံနိုင်ဆိုတာ တကယ်ပါပဲး( မီးငယ်ရဲ့ တကယ့်ကိုလေးစားကြည်ညိုခဲ့ရတဲ့ အနှစ်နှစ်အလလ တန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ လူတယောက် ဒီနေ့ ဆုံးရှုံးလိုက် ပါတယ်.. တကယ့်ကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ မျက်ရည်ကျမိခဲ့တယ် .. တယောက်ထဲပါပဲ .. ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့ အချိန် ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ မျက်ရည်ကျမိတယ် .. မီးငယ် အံ့သြတကြီး မျက်နှာကို ငေးကြည့်လို့ ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့တာက လွဲလို့ တည်ငြိမ်ခဲ့ပါတယ် ..
သိပ်ကိုလေးစားခဲ့တဲ့ နူးညံ့တဲ့လူတယောက်ဟာ မမြင်ရတဲ စိတ်တွေပြောင်းလဲတဲ့အခါ ဒီရုပ်ဒီရည်နဲ ဒီလူတော့ မှန်ပါရဲ့ .. အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့ လူရဲ့စိတ် အဲ့လောက်ပြောင်းလဲနိုင်သလား ဆိုတာ တွေးမိခဲ့တယ် .. ဒေသ ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲတဲ့အခါ လူတယောက်ရဲ့စိတ်က အဲ့လောက်တောင် ပြောင်းလဲနိုင်သလား ... မီးငယ် သေချာကိုတွေးနေမိတယ် ... ကိုယ်ဆိုရင်ရော .. အဲ့လောက်ပြောင်းလဲမလား .. ဟင့်အင်း .. အဲ့ဒါတော့ သေချာတယ် .. မီးငယ် လုံးဝမပြောင်းလဲဘူး ..
ဒေသတခုမှာတုန်းကတော့ လူရှေ့မှာ စကားပြောရင်တောင် လေသံလေးကို တိုးဖွဖွ ပြောတတ်တဲ့ သူ့စရိုက် .. အို.. ဒီနေ့တော့ တခြားတယောက် ဖြစ်နေခဲ့တယ် .. တခါမှကို မမြင်ဖူးတဲ့ လူတယောက်ပါလားး( လေသံမာမာနဲ့ ပြောနေခဲ့တာ မီးငယ် လေးစားခဲ့ဖူးတဲ့သူ မဟုတ်တော့သလိုပဲ .. ကိုယ်လေးစားခဲ့တာ နူးညံ့မှုတွေလည်း ပါခဲ့တယ်လေ ... ဒေသတခုဟာ လူတယောက်ကို အဲ့လောက် ပြောင်းလဲစေနိုင်သလား ..
တခြားလူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ ရိုင်းပျတဲ့အမူအရာ ပြဖို့ ဝေးစွ .. ဒေါသဆိုတာ မရှိတဲ့သူလား လို့ ထင်ခဲ့ပါတယ် ..
အဲ့ဒီဒေသမှာတုန်းက သူ သိပ်ယဉ်ကျေးခဲ့တယ်လေ ... ဒီနေ့တော့ သူ တည့်တည့်ကို ရိုင်းပျခဲ့တယ် .. ခက်တာက သူ့ကို သိပ်လေးစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ့်ကို ဖြစ်နေတာပဲး( .. ရိုင်းပျတာကိုခံရလောက်အောင် မဟုတ်တာကို ကိုယ်က မလုပ်ခဲ့မိတော့လည်း ခက်နေတော့တာပဲ .. ဒေသတခုဟာ လူတယောက်ကို အဲ့လောက် ပြောင်းလဲစေနိုင်သလား ....
လူတယောက်ရဲ့ မျက်နှာအမူအရာနဲ့ သူ့ရဲ့ ဆက်ဆံပုံတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ ဒီလူရဲ့ အတွင်းသဏ္ဍာန်ကို ခန့်မှန်းလို့ မရဘူးဆိုတာ တအံ့တသြနဲ့ လက်ခံလိုက်ရပါတယ် .. တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်တင်ပြောတာ မဟုတ်ရပါ .. မီးငယ်လေ .. တနှစ်ကျော်တိတိ ငွေအား လူအား .. တတ်နိုင်သလောက် ကူညီခဲ့ဖူးတယ် .. ဒုက္ခရောက်ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဒုက္ခမရောက်စေရအောင် တကယ့်ကို ဖြူဖြူစင်စင် ကူညီခဲ့ပါတယ် .. ဒေသတခုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တခုဟာ လူတယောက်ကို အဲ့လောက် ပြောင်းလဲ စေနိုင်သလား..
မီးငယ် အတွက် ငွေကြေးပမာဏတခု ဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ် .. စုဆောင်းနေရပါတယ်ဆိုတဲ့ လူကျမှပဲကွယ်း( ဒါပေမယ့် မီးငယ် သင်ခန်းစာတခုကို ၀ယ်ယူလိုက်တယ်လို့ သဘောထားပါတယ်း) လူတွေရဲ့ စရိုက်ကို သိအောင် သင်ယူလိုက်ရတယ်ပေါ့လေ .. အရမ်းကို ယူကျုံးမရ နှမြောမိတာက လေးစားကြည်ညိရမယ့် လူတယောက် လျော့သွားတာ ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပါပဲ ...
အော် .. ရုပ်တခု စိတ်ကိုးဆယ် .. တကယ်မှန်ပါလားနော် .. ဒီလူကတော့ ဒီလူပါပဲ .. ဘယ်လိုမှ မမြင်နိုင်တဲ့ သူရဲ့ စိတ်နဲ့ အကျင့်စရိုက် .... ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတာ ဆိုရင်တောင် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ နှမြောတသစွာနဲ့ ပဲ .. မီးငယ် စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်လေ .... ဘ၀အတွက် သင်ခန်းစာတခုပေါ့ ( အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာပေါ့လေ ...း)
ပြောရင်းနဲ့ မီးငယ်လည်း ငိုချင်ရီချင် ဖြစ်လာပြန်ပြီး( မီးငယ်လည်း ရုပ်တခု စိတ်ကိုးဆယ် ဖြစ်နေပြီ ထင်ပါရဲ့း)
Posted by မီးငယ် at 11:03 PM4comments
Labels: ခံစားမှု, အတွေးသက်သက်
ကိုယ့်ရင်ထဲ မြူတွေဆိုင်းနေခဲ့တယ် ..
ဘ၀တခုအတွက် လက်တွေ့မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ကိုယ် ..
ရုတ်တရက်လန့်နိုးမှပဲ အိပ်မက်မှန်း သိခဲ့ရတယ် ..
ကိုယ့်ရင်ထဲ မိုးတွေသည်းနေခဲ့လေရဲ့ ..
နိုးထချိန်မှာ အပြုံးကလေးတပွင့်တော့ ရှိရမယ်..
ရင်တွေ ကွဲမတတ်နာကျင်နေခဲ့တယ် ...
Posted by မီးငယ် at 4:09 PM 1 comments
Labels: ကဗျာ, ခံစားမှု
တခါတုန်းက ဂျပန်လူမျိုးတယောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို အလည်ခရီးသွားရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ သူက တက္ကစီငှားပြီး လေဆိပ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာ ဟွန်ဒါတစီးက သူတို့ကားကို ကျော်တက်သွားတာမြင်လိုက်ရတယ်.။ ၀မ်းသာအားရနဲ့ သူအော်လိုက်တာက
ဟွန်ဒါကား အရမ်းမြန်တာပဲ။ ဂျပန်မှာလုပ်တာကိုး...
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ တိုယိုတာတစီးက တက္ကစီကို ဖြတ်ကျော်သွားပြန်တယ်။ ဂျပန်လူမျိုးကလည်း ယခင်အတိုင်းပဲ ပြတင်းပေါက်ကနေ ခေါင်းထုတ်ပြီးအော်လိုက်ပြန်တယ်။
တိုယိုတာ အရမ်းမြန်တာပဲ။ ဂျပန်မှာလုပ်တာကိုး...
အဲ့ဒီနောက်မှာ မစ်ဆူဘီရှီတစီးက တက္ကစီကို ကျော်တက်သွားပြန်တယ်။ တတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဂျပန်ကအော်လိုက်ပြန်သတဲ့။
မစ်ဆူဘီရှီ အရမ်းမြန်တာပဲ။ ဂျပန်မှာ လုပ်တာကိုး ...
တက္ကစီမောင်းတဲ့သူလည်း ဒေါသတော့ စဖြစ်လာပါပြီ။ သူက အမေရိကန်လူမျိုးပေကိုး. ဒါပေမယ့် သူတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးပဲ နေနေခဲ့ပါတယ်။ အဆုံးမတော့ တက္ကစီဟာ လေဆိပ်ကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ.
ကျသင့်ငွေ ဒေါ်လာ၃၀၀လို့ သူပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာတော့ တက္ကစီ မောင်းသူက ပြန်အော်ပါတော့တယ်။
မီတာ အရမ်းမြန်တယ်။ ဂျပန်မှာလုပ်ထားတာ......
Posted by မီးငယ် at 5:14 PM 1 comments
Posted by မီးငယ် at 11:09 AM3comments